Orinasa mpanamboatra finday China Phone Charms | SJJ
Ny orinasan-tsika dia manome karazana ody finday isan-karazany vita amin'ny vy metaly. Misy firavaka an-tariby vy miaraka amina endrika 2D na 3D. Ny sarimiaina na mascot sy logo manokana dia azo ampiharina avokoa.
Misy karazana ody firavaka karazana Pretty Shiny afaka mamokatra. Ny ody an-tariby dia mifamatotra amin'ny telefaona finday amin'ny alàlan'ny mpampifandray telefaona na plug silikônika, ny telefaona sasany dia mety manana lavaka tadidy izay azo apetaka amin'ny tadiny ary ny tadin-telefaona koa dia manome asa fanampiny toy ny fanadiovana ny lamba. Manaraka ny manintona,mpihazona telefaonamafana be. Ny charme dia azo ampiana amin'ny mpihazona azy mba hahatonga azy io ho tsara sy azo ampiharina, Pretty Shiny dia mitana ny anjara asany amin'ny fanaovana ny ody ho toetra mampiavaka azy kokoa. Avy amin'ny vy, afaka manome PVC, silicone, hoditra, amboradara ihany koa isika mba hanaovana azy ireo. Serivisy kanto maimaimpoana ary misy santionany misy. Raha misy zavatra mahaliana anao dia aza misalasala mifandray aminay.
Misy bobongolo efa misy
Fametahana firavaka: diamondra, jiro LED, fanadiovana efijery, fanesorana ny efijery, rojo baolina
Haingo: nahantona tamin'ny bokotra, finday, fakantsary, kitapo, solosaina finday
Haben'ny habe, loko, logo.
Teo aloha: Mpanjifa divay
Manaraka: Badge ny fiara ary marika ny fiara
ody finday vy
Fiantsoana an-tariby Krismasy
Mpihazona telefaona azo zahana Krismasy